Mureza mureza danda Manufacturers - China Mureza mureza danda Suppliers & Factory
Inozivikanwawo semisodzi inoyerera mireza, misodzi mireza mireza or mireza yemahombekombe, Teardrop inobhururuka mureza ine nzvimbo yakakura inobata maziso uye inonyanya kukodzera kushanda mumamiriro emhepo.Zvinonzi yekutanga yaive yekuSouth Africa asi takaivandudza kuChina nehunyanzvi hwekugadzira engineering uye kuita mwero mutsva muindasitiri iyi yepasi rose.
S banner, inonziwofeather banner ormureza wechikepekanablade flag.Iyo inodhura zvakanyanya nzira yekukwezva kutarisa kunze uye mukati mebhizinesi chero ripi zvaro, chiitiko, kana kutengeserana show.Rudzi urwuratidza mureza wekushambadzainogona kushandiswa zvakare uye inonyatso mushandisi, unogona kuseta mune imwe nyaya yemaminetsi.Yeduminhenga mirezaanowanikwa muzvimiro zvina: Angled/ Concave/ Convex/straight.
4 mu 1 beachflags pole system ndicho chigadzirwa chedu patent uye chakatangwa neWZRODS pasi rose muna 2008, chinogona kutsigira mana akasiyana ane mukurumbira mureza (feather flag,mureza unobhururuka,shark fin murezauyerectangle mureza) neimwe mureza mumwe chete.Zviri nyore kushandura uye kudzora stock yako kuti isangane nekukasira kurongeka kwevatengi, dzikisa yako hesiti uye stock nzvimbo.Chimwe chezvigadzirwa zvedu zvakakurumbira.
Budge flagpole system ndeye yakakosha nhevedzano yebhajeti purojekiti yaunogona kuve ne2 akasiyana mureza chimiro (mireza yemisoro&misodzi mireza) mune imwe seti yedanda ine mutengo wakaderera asi basa rakafanana.Iyo yakanakisa sarudzo yekushandisa mumugwagwa wepamusoro, iyo yaunogona kuiratidza pamberi pechitoro chako.
Wall Mounted flagpoles, White powder yakavharwa nealuminium flagpole ine Unique anti-furling dhizaini kudzivirira mureza kuputira mureza, nyore kuisa, chiyero saizi 2m, madziro bracket mumakona matatu (0 degree/ 35 degree 90 degree)